Shariif Xasan oo wareysi ku weeraray Madaxweyne Farmaajo | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Shariif Xasan oo wareysi ku weeraray Madaxweyne Farmaajo
Shariif Xasan oo wareysi ku weeraray Madaxweyne Farmaajo
Shariif Xasan Sheekh Aadan, Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo in muddo ahba ka maqnaa saaxada siyaasadda ee dalka ayaa maanta weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo iminka ku magacaaban Gudoomiye Kuxigeenka Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sharci-darro ku tilmaamay in muddo ka badan 50 maalmood, aanu weli Madaxweynuhu soo magacaabin Ra’iisal Wasaaraha xigga, xilli 25-kii bishii Luulyo sifo aan sharci ahayn lagu riday Ra’iisal Wasaarihii Xukuumadda, Xasan Cali Khayre.
“Anaga aragtideena waxa waaye dalka Somaliya dhibaatooyin badanuu soo maray, laakiin waayadii dambe dowlad ayaa Ilaahay na siiyay, dowladda ayadoo dowlad baarlamaanteeriya ah oo dastuur iyo xeerar leh. Marka Madaxweynaha wax buu leeyahay, Gudoomiyaha Baarlamaanka wax buu leeyahay, Ra’iisal Wasaaruhuna wax buu leeyaha, sidaasi darteed in sharciga la ilaaliyo oo dalku Madaxweyne keliya ma maamuli karo.” Ayuu yiri Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wareysi siiyay BBC.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Ra’iisal Wasaarihii oo dhacay oo Baarlamaankii ansixiyay shalay ka qaaday, hadana in Xukuumaddii oo shaqeyneyso la yiraahdo, oo guddiyo ay magacaabaan, sharciyana soo gudbiyaan wax sharcigeenu qabo maaha.”
Mar la weydiiyay ka Madasha Xisbiyada Qaran ahaan waxa ay doonayaan in la sameeyo ayuu yiri “Anaga waxay nala tahay in Ra’iisal Wasaare la magacaabo, Xukuumadda la dhiso, Baarlamaanku ansixiyo maalmaba haka dhin-naatee, sidii uu sharcigu ahaa. Dowladdu waa dowlad baarlamaanteeriya oo Ra’iisal Wasaare iyo Madaxweyne leh. Marka Madaxweynaha door buu leeyahay, Ra’iisal Wasaaruhu door buu leeyahay, Baarlamaankana door buu leeyahay, dalkana in dastuur lagu maamulaa rabnaa. Anaga in shakhsi maamulo ma u aragno inay xaq tahay ama inay sax tahay. Marka in sidaas guddiyo lagu magacaabo, xeerar la soo saaro oo waxbaa la ansixiyay la yiraahdo, waxaan u aragnaa in dastuurkii meel looga dhacay, dowladnimadana meel looga dhacay.”
Su’aal ahayd dastuurka meesha looga dhacay bal inoo sheeg oo la weydiiyay waxa uu ku jawaabay “30 maalmood ka badan Ra’iisal Wasaare la’aan dalku ma ahaan karo, wixii dastuurkan laga waayana kii lixdankii ayaa loo noqonayaa, kii lixdankii ayayna ku qorantahay. Madaxweynaha markii la doortay asagaa afkiisa ku sheegay 30 maalmood baan lahaa, 16 maalmood ayaana ku soo magacaabay isagoo leh Ra’iisal Wasaarihii uu soo magacaabay. Markaa waa arrin iska cad, laakiin sidaan rabaa yeelaa ama la jiifiyaa bannaan meel ay ku taalo ma jirto.”
Halkan kaga boggo wareysiga Shariif Xasan